I-BlitzMetrics: Ama-Dashboard Ezokuxhumana Komphakathi Womkhiqizo Wakho | Martech Zone
I-BlitzMetrics: Ama-Dashboard Ezokuxhumana Komphakathi Womkhiqizo Wakho
ULwesine, May 30, 2013 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
IBlitzMetrics inikeza ideshibhodi yomphakathi eqapha idatha yakho kuzo zonke iziteshi zakho nemikhiqizo endaweni eyodwa. Akunasidingo sokucinga amamethrikhi kuwo wonke amapulatifomu ahlukahlukene wezenhlalo. Uhlelo luhlinzeka ngokubika kubalandeli bakho abaphezulu nabalandeli ukukusiza ukwakha ukwazisa ngomkhiqizo, ukuzibandakanya futhi ekugcineni - ukuguqulwa.
Ngaphezu kwakho konke, iBlitzMetrics isiza abathengisi ukuthi baqonde ukuthi yikuphi nokuthi yikuphi okuqukethwe okuphumelela kakhulu ukuze ukwazi ukulungisa imiyalezo yakho ngokuya ngalokho okwenza abalandeli bakho bajabule.
Izici zeBlitzMetrics nezinzuzo
Gada okuqukethwe kuyo yonke i-Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr
Khiqiza imibiko emihle yangokwezifiso.
Isilinganiso ngokumelene nabancintisana nabo.
Landelela ifayela lakho le- Inani Lemidiya Elitholiwe.
Funda ukuthi iziphi izibalo zabantu ezisebenza kakhulu.
Thola lapho okuqukethwe kwakho kuba nomthelela omkhulu.
Thuthukisa ukufinyelela kwakho nokuzibandakanya ngokulandela ukusebenza kokuqukethwe.
Gada i-Newsfeed yakho Isilinganiso Sokubika Nempendulo.
Finyelela idatha yakho noma kuphi kunoma iyiphi idivayisi.
Tags: ukusebenza kokuqukethweamadeshiukubalwa kwabantuithole inani lemidiyalwekucocisanaFacebookfansisilinganiso sempenduloinstagramamadeshobhodi omphakathiama-dashboard ezokuxhumanatumblrTwitteryoutube
Sisebenzisa Kanjani Amathuluzi Omphakathi Emsebenzini
Kuyini ukumaketha kweDijithali
UJun 8, 2013 ngo-4: 39 AM
UDoug– wow, ngiyabonga ngokubuyekeza!
Ngiyaxolisa ukuthi angizange ngikuqaphele ngaphambili.
Ngicela ungitshele uma kunesicelo esithile onaso sokuthi singenza kanjani lawa madeshibhodi abe ngcono!